Madaxweyne Faroole "Dilalka Puntland ka dhaca DFKMG Somalia ayaa ka danbaysa" – SBC
Madaxweyne Faroole "Dilalka Puntland ka dhaca DFKMG Somalia ayaa ka danbaysa"
Boosaaso- Madaxweynaha dowlada Puntland ee Soomaaliya Cabdi raxmaan Maxamed Maxamuud Faroole oo kula hadlayay warbaahinta xarunta madaxtooyada ee magaalada Boosaaso Ayaa sheegay in dilalka ka dhacayay maalmihii la soo dhaafay qaar ka mid ah Magaalooyin ka tirsan Puntland ay ka danbayso DKMG ee Soomaaliya.
Madaxweyne Faroole ayaa sidoo kale sheegay in DFKMG ay horay u soo hubaysay jabhada SSC kuna taageertay dhaqaale iyo dhiirigalin si ay qalqal amaan dari ah u galiso dadka Ku abtirsada Puntland kuwaasoo ku naalooda nabad iyo nolol. sida uu sheegay madaxweynuhu.
Faroole ayaa intaasi ku daray waa sida hadalka uu u dhigay’e in jabhadaasi ay u suuroobi wayday ama ay u hirgali Wayday taas badalkeedana ay DKMG ee Soomaaliya ay ku bedeshay dilalka qarsoon sida Uu hadalka u dhigay waxaana uu sheegay in puntland lagu hungoobayo cid walba oo Amaan daro wada.
Madaxweynaha Puntland Cabdi raxmaan Faroole ayaa sheegay hadalkan mar uu soo Gaaray magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari isagoo ka soo kicitimay magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkaar halkaasoo maalontii la soo dhaafay uu ku sugnaa.
faarax ina-faarax says:
Apriil 30, 2011 at 2:01 pm
Faroole hadduu madaxweynanimo somalia rabo, waxaa ku haboon inuu si sharaf leh isu sharaxo, kana qayb galo doorasha, ma wanaagsana inuu eedaymo malayacni ah meel walba la istaago,, ummaddu carruur ma aha, Hadduu ku guuldaraystay wixii loo doortay ee ahyd soo celinta nidaamka iyo kala danbeynta puntland, ma aha inuu shaqaddisii oo uu kasoo bixi waayay gudana waayay ku eedeeyo qof kale.